सबैले हेर्न मिल्ने 'रोमियो' !!! – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentसबैले हेर्न मिल्ने ‘रोमियो’ !!!
२२ कात्तिक २०७४,काठमान्डौ । कात्तिक २४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘रोमयो’को सेन्सर सकिएको छ । मंगलबार गरिएको सेन्सरबाट चलचित्रले युनिभर्सल सर्टिफिकेट पाएको छ । मतलब ‘रोमियो’लाई सम्पुर्ण वर्गका दर्शकले हेर्न पाउने भएका छन् ।
एचआरके फिल्म प्रोडक्सनको व्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रलाई शंकर कार्कीले निर्देशन गरेका छन् । चलचित्रमा हसनराजा खान, निशा अधिकारी, मेलिना मानन्धर, ओसिमा बनु लगायतको मुख्य भूमिकामा रहेको छ । फिल्म हेरिसकेपछि सेन्सरबाट पनि उत्कृष्ट प्रतिक्रिया आएको भन्दै हसनले खुशी व्यक्त गरे । उनले, दर्शकले पनि फिल्मलाई मन पराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यो फिल्ममा अभिनेत्री नीशा अधिकारी ‘कल गल’को भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छिन् । उनै, नीशाको प्रेममा रोमियो परेपछि आउने उतारचढावमा फिल्म निर्माण भएको छ । लभस्टोरी फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरेकाले पनि यो फिल्म चल्नेमा हसन आशावादी छन् । फिल्ममा समावेश ‘ल्याङ ल्याङ’ बोलको गीत हिट भैसकेको छ ।